सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेस, इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेस, इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष !
मुलुकको सबैभन्दा जेठो दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पछिल्लो समय निकै दयनीय हुन पुगेको छ। मुलुकमा भएका ठूला ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेको र सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रही मुलुकको बागडोर सम्हालेको दल यो अवस्थामा पुग्ला भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर अपेक्षाविपरित पछिल्लो निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई ‘बिचरो’ बनाइदिएको छ। यतिसम्म कि विगतको सत्ताधारी दल अहिले बलियो प्रतिपक्षको हैसियतमा सम्म बाँकी रहन सकेको छैन ।
अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षी त हो तर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा गर्नसमेत कांग्रेस असक्षम भइसकेको छ। कांग्रेस अहिले लगभग भूमिकाशून्य अवस्थामा पुगेको छ। यति लामो इतिहास भएको पार्टी यस्तो दयनीय हालतमा पुग्दा यसले मुलुकको राजनैतिक सन्तुलन पनि पूरै हल्लिएको छ। मुलुक अहिले प्रतिपक्षविहीन जस्तो अवस्थामा पुगेको छ।
नेतृत्वले नै कांग्रेस कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुराको खोजी गर्दै यो अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने बाटो पनि पहिल्याउनुपर्छ।
जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको हैसियत दिएपनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा पनि कांग्रेस छैन। कांग्रेसको आवाजलाई संसदमा दबाएरै अघि बढ्न सक्ने हैसियत सत्ताधारी बाम गठबन्धनसँग छ । र, कांग्रेसविरुद्ध उनीहरुले यसरी मोर्चाबन्दी गरेका छन् कि त्यो तोड्न सक्ने हैसियत कांग्रेसमा होला भन्ने विश्वास गर्न समेत कठिन छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा कांग्रेसकै कारण मुलुक प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा पुगेको छ भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्दैन।
हो, आफ्नो दयनीय हालतको जिम्मेवार स्वयं कांग्रेस नै हो। उसैले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदा यसरी खुम्चिनुपरेको हो। कांग्रेसको यो हालतको जिम्मेवार कांग्रेस नेतृत्व हो। नेतृत्वले नै कांग्रेस कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुराको खोजी गर्दै यो अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने बाटो पनि पहिल्याउनुपर्छ। कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरहादुर देउवाले यसअघि तीन चरणका निर्वाचन पनि सम्पन्न गराउनु भयो।
देउवा चार पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको र राज्य संचालनमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति पनि हो। निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु भएको श्रेय उहाँलाई जान्छ, सँगै कांग्रेसलाई यो दुर्दशामा पुर्याउने जस अपजस पनि उहाँमै जान्छ। नेतृत्वले जस अपजस दुवै लिन सक्नुपर्छ ।
र, कांग्रेसको यो अवस्थाको दोष पनि नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। निर्वाचनमा पराजयको मुख्य कारण भनेको कांग्रेस नै हो। कांग्रेसले नै आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदा पराजित हुनुपरेको हो। कांग्रेसमा भएको विचलनले पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउने काम गरेको छ। पार्टीभित्रको विचलनले जनतामा कांग्रेसप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको साँचो हो। त्यही वितृष्णा निर्वाचनमा पोखिएको हो ।
जनतामा कांग्रेसप्रति आकर्षण केही समय अगाडिदेखि नै क्रमशः घट्दै गएको थियो। निर्वाचनमा त त्यो सतहमा आएको मात्र हो। हुन त कांग्रेसमा विचलन अहिलेमात्र भएको भने होइन। ०५०/५१ सालदेखि नै कांग्रेसमा विचलन सुरु भएको थियो। तर, त्यो बेला र अहिलेको परिस्थिति फरक भयो। उतिबेला पार्टीले आफ्नो दिशा गुमाउन लाग्दा सम्हाल्ने अनुभवी नेताहरु पाएकोमा अहिले त्यो पाउन सकेन।
शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नु भयो। उहाँले सैद्धान्तिक विचलन कहाँ भयो, किन भयो कहाँ सच्याउनुपर्छ भनेर भन्ने अभिभावक भएनन्। उहाँको घरभित्रबाट पनि भएन, बाहिर पार्टीबाट पनि भएन।
त्यतिबेला एउटा परिपक्व सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, शीर्ष नेता गणेशमान सिंह जस्ता त्यागी र परिपक्व नेताले खबरदारी गर्नुहुन्थ्यो। यसैगरी गिरिजाबाबु अत्यन्त कुशल संगठन गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक हुँदा सैद्धान्तिक विचलनमा पर्नु भएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर, अहिले भने त्यस्ता अभिभावक नभएकै कारण कांग्रेसले बाटो बिरायो र सही बाटोमा फर्कन सकेन । उतिबेला पार्टीले ट्रयाक छोड्न लागेको महसुस हुनासाथ ती कुरामा खबरदारी गर्ने अभिभावक हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा आज शेरहादुर देउवाले पाउनु भएन।
शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नु भयो। उहाँले सैद्धान्तिक विचलन कहाँ भयो, किन भयो कहाँ सच्याउनुपर्छ भनेर भन्ने अभिभावक भएनन्। उहाँको घरभित्रबाट पनि भएन, बाहिर पार्टीबाट पनि भएन। उहाँ सहयोगी भन्दा स्वार्थी झुण्डबाट घेरिनु भयो। जसको फलस्वरुप सैद्धान्तिक विचलन र भ्रष्टाचार बढ्यो, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उहाँलाई गलत सल्लाह र गाइडलाइन दिइयो।
जसका कारण नेपाली कांग्रेसले आजको दुर्दशा भोग्नु परेको छ। कांग्रेसको अहिलेको अवस्थाको मुख्य कारण त विचलन नै हो तर यसका सहायक कारणहरु पनि छन् । केही सानातिना अन्य कारण पनि छन् जसका कारण नेपाली कांग्रेसले आजको दुर्दशा भोग्नु परेको छ। कांग्रेसमा यसअघि पनि छत्तीसे र बहत्तरे गुट जन्मिएको थियो। तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम पाका अनुभवी र त्यागी नेताहरुले गर्नुहुन्थ्यो।
सादा जीवन उच्च विचारका नेताहरु भएका कारण कांग्रेसले यसअघि आजको जस्तो दुर्दशा व्यहोर्नु परेन। यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न हुन्थ्यो। तर, त्योबेला पार्टीमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको खाँचो थिएन। अहिले भने अवस्था त्यस्तो थिएन । यही कठिन अवस्थामा सही निर्णय लिन नसक्दा कांग्रेस अहिलेको दुर्दशामा पुग्यो ।
दयनीय अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले कसरी आफूलाई पुनर्जागरण गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने आजको चिन्ताको विषय हो। यो विषयमा राष्ट्र र कार्यकर्ताको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चिन्ता छ। कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन्। उहाँले जिम्मेवारीमा बसेर जे पायो त्यही बोलेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन भन्नु भएको छ। तर, समस्या कसरी आए, सभापतिले के गल्ती गर्नु भएको छ, भन्ने कुरा आफूले बुझेको छ भनेर उहाँले भन्नु भएको छ।
र आफू सभापतिमा उठ्ने र आफू कुनै गुट उपगुटमा नरहेको र कांग्रेस बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुक र जनतालाई बुझ्नु भएको रहेछ भने उहाँले सभापति बनेर कांग्रेसलाई हाँक्न सक्नु भयो भने उहाँलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिको खाँचो रहँदैन र यसमै कांग्रेसको भलो पनि छ।